१० लाख डलर पाए के गर्नुहुन्छ? अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ले दिइन यस्तो जवाफ। – Dailny NpNews
१० लाख डलर पाए के गर्नुहुन्छ? अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ले दिइन यस्तो जवाफ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ०५, २०७८ समय: ८:५९:३३
बलिउड नायिका ऐश्वर्या रायलाई धेरैले ‘ब्यस्टी विथ ब्रेन’ भन्छन् । कतिपय अवस्थामा त उनले यो कुरा पुष्टिसमेत गरिसकेकी छिन् । सन् १९९४ मा उनले विश्व सुन्दरीको ताज जितेकी थिइन् । उक्त ताज हासिल गरेलगत्तै उनलाई १० लाख डलर पाएको खण्डमा…
बलिउड नायिका ऐश्वर्या रायलाई धेरैले ‘ब्यस्टी विथ ब्रेन’ भन्छन् । कतिपय अवस्थामा त उनले यो कुरा पुष्टिसमेत गरिसकेकी छिन् । सन् १९९४ मा उनले विश्व सुन्दरीको ताज जितेकी थिइन् । उक्त ताज हासिल गरेलगत्तै उनलाई १० लाख डलर पाएको खण्डमा के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्दा उनले निकै समझदारीपूर्ण जवाफ दिएकी थिइन्।
एक समाचार एजेन्सीलाई दिएको जवाफमा ऐश्वर्याले आफूले यो प्रश्नको जवाफ केही सेकेन्डमा दिन नसक्ने बताएकी थिइन् । यसका लागि उनले निकै ध्यान दिएर सोच्नुपर्ने बताएकी थिइन्।
‘व्यवहारिक प्रयोग’ ऐश्वर्याले पैसा अत्यधिक धेरै भएकाले यसलाई हल्का रुपमा नलिने बताउँदै उक्त पैसाको व्यवहारिक प्रयोग गर्ने बताएकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘यो खर्च गर्नका लागि सोच्नुपर्नेछ ।’सार्थक कुरामा खर्च गर्नेछु’
आफूले यस्तो मिस वर्ल्डको टाइटल जितेका कारण नभनेको पनि स्पष्ट पारिन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘यो रकम म यस्तो कुराका लागि खर्च गर्ने जुन साँच्चै नै सार्थक होस् र खुसीसमेत देओस् ।’संसारमा पैसाको महत्व अत्यधिकः ऐश्वर्याले भनेकी थिइन्, ‘पैसाले खुसी त किन्न सकिँदैन तर म अरुलाई मद्दत गरेर खुसी हुनसक्छु । यो संसारमा पैसाको निकै ठूलो भूमिका छ ।’